दुनियाँ नै चकित पार्ने ७ सेलिब्रेटीहरुको तस्वीर ! - Sagarmatha Online News Portal
दुनियाँ नै चकित पार्ने ७ सेलिब्रेटीहरुको तस्वीर !
एजेन्सी १६ असार २०७६, सोमबार
एजेन्सी । यो संसारमा अनेक खालका पत्याउँनै नसकिने अचम्म बनाउँने घटनाहरु हुन्छन् । चाहे त्यो मानव जीवनमा होस वा अन्य पशुपंक्षीमा !
संसारमा यस्ता घटनाहरु भएका छन्, की त्यो तस्वीर हेर्दा तपाईलाई हैरान बनाउँछ । त्यत्ति मात्र होइन कतै फोटोसपबाट पो तस्वीर एडिट गरेर बनाइएको हो की भनेर भन्न तपाईलाई करै लाग्छ ? जब तपाईले ती अचम्म लाग्दा तस्वीरहरुको बारेमा गुगलमा सर्च गरेर हेर्नुहुन्छ, अनि तपाई अचम्मित हुँदै पत्याउँन करै लाग्छ ?
सामान्य मानिस वा अन्य पशुपंक्षीहरुको यस्ता अनौंठो, पत्याउँनै नसकिने खालका तस्वीहरु देख्दा त केहि समय जिब्रो टोके पनि खासै चर्चा हुँदैन । तर विश्व चर्चित सेलिब्रेटीहरुले हजारौं मानिसको भिडमा प्रस्तुति दिँदा होस वा उनीहरुलाई अभिवादन गर्दै गर्दाको क्षणमा होस ! एक्कासी उनीहरुले लगाएको कपडा च्यातिएर वा खुस्किएर भित्रि कपडा देखियो भने के होला ? उनीहरुको सानो गल्तीले हजारौं दर्शक, फ्यानका अगाडि लाजमर्दो मात्र होइन, विभिन्न सामाजिक सञ्जालमा उनीहरुको त्यो पत्याउँनै नसकिने अचम्मका तस्वीर ट्रोल हुन्छ, बनाइन्छ ।
संसारका केहि नाम चलेका सेलिब्रेटीहरुको जीवनमा पनि यस्ता हजारौं दर्शक र फ्यानका अगाडि लज्जित हुने खालका विभिन्न घटना भएका छन् । कोहिका पाइन्ट च्यातिएर भित्रि कपडा देखिएको, कसैको स्टेजमा प्रस्तुति दिँदादिँदै मिनिस्कर्ट खुस्किएर लज्जित भएका घटनाहरु सुन्दा त अचम्म लाग्छ भने, झनै तस्वीर हेर्दा एकछिन त पत्याउनै गाह्रो हुन्छ ? यस्तो हालतमा ती सेलिब्रेटीहरुको अवस्था कस्तो होला ? तपाई आफै अनुमान गर्नुहोस ! विश्व चर्चित सेलिब्रेटीहरुको पत्याउँनै नसकिने यी ७ तस्वीरहरु हेर्नुहोस !